TAG ထားတယ်ဗျို့: အချစ်
Sunday, March 8, 2009 by ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်
ဤအရာဟုဆိုအပ်သော ထိုအရာသည် ဘာများပါလိမ့်..!!
(၁) ငယ်ငယ်က အတွေးတွေထဲမှာတော့ အမျိုးမျိုးပေါ့လေ.. စက်ဝိုင်းလိုလား..! လေးထောင့်စက်စက် အရာလား..! တြိဂံလို အနားသုံးနားလား..! အပေါင်းသင်္ကေတနဲ့ ထပ်ပေါင်းလို့ရတဲ့အရာလား..! အစားလို ဂဏန်းတစ်ခုနဲ့ စားရင်း သုံညများကြွင်းတတ်လား..!
(၂) ပန်းသီးလို ခပ်ချိုချိုလား..! သံပုရာသီးလို ချဉ်ချဉ်ပြုံးပြုံးကြီးလား..! စတော်ဘယ်ရီသီးလို နီတာရဲလေးလား..! ဒူးရင်းသီးလို ချိုအီမွှေးကြီးလား..! ဒါမှမဟုတ်.. ဒညင်းသီးလိုများ... အဟက်..!!
(၃) တယောသံလို တအီအီလား..! နှဲသံလိုလို နေဝင်ရီသရောကို သတိရစေတာလား..! စောင်းသံလို ချိုနွဲ့နွဲ့လေလား..! ပီယာနိုလို ရင်သိမ့်မှော်ဝင် စေတတ်လား.! ဂစ်တာသံလေးလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး တဒင်ဒင် တဒေါင်ဒေါင်လား..! ဒါမှမဟုတ်.. ဒရမ်သံကြီးလို.. အမလေး.. တဒုန်းဒုန်းကြီးများလား..!
(၄) သီချင်းကြီးတစ်ပုဒ်လို လေးတွဲတွဲလား..! ဒစ္စကိုသီချင်းလို ကိုယ်ကလှုပ်ရှားချင်ချင် ဖြစ်လာရောလား..! ပေါ့ပ်တစ်ပုဒ်လိုလား..! ပန့်ခ်လို စာသားတူတွေကို ခဏခဏ ထပ်ကျော့တတ်တာလား..! ရော့ခ်လိုခပ်မြောက်မြောက်နဲ့ ခေါင်းတွေရမ်းချင်လာရောလား..! ဘလူးစ်လို မုဒ်တွေဝင်လာတတ်တာလား..! ဒါမှမဟုတ်.... အာရ်အမ်မ်ဘီလို ငြိမ့်တိမ့်တိမ့်လေးလား..! ရက်ပ်လိုလို အာလိပ် လျှာလိပ် တရကြမ်းကြီးလား..!
နားလည်တတ်ပြီအထင်နှင့် နားမလည်စွာ ဝေဝါးနေဆဲ...
ဟော.. တစ်ကွေ့ နောက်ထပ်... တစ်ကွေ့ ပြီးတော့... နောက်ထပ်..!! ပြီးတော့....
အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ အဲ့ဒါကို အချစ်လို့ခေါ်တာ..။
အဲ့ဒီ အဲ့ဒါကို အဲ့ဒါကြောင့် အော်.. အချစ်ဆိုတာ အဲ့ဒါ.. အဲ့ဒါ..!!
(၁) စက်ဝိုင်းလိုလည်း မဟုတ်ဘူး.. လေးဒေါင့်လိုလည်း မဟုတ်ဘူးဟ.. တြိဂံလိုလည်း မချွန်ပါဘူး.. ဘယ်လိုလေးမှန်းကို မသိတာ.. အဲ့.. စားစရာရှိရင် ပေါင်းသာပေါင်း အကြွင်းကတော့ ပေါင်းသလောက် ကြွင်းမှာ.. အဲ့.. အဲ့.. ဟုတ်တယ်.. ကြွင်းမှာ.. အဲ့ဒါ.. အဲ့ဒါ..။
(၂) စတော်ဘယ်ရီလို နီတာရဲလေးကို ပန်းသီးလေးလို ဂျွတ် ကနဲ ကိုက်.. ဒူးရင်းသီးကြီးကို အားရပါးရဖက်.. အဲ့ ဒူးရင်းသီးလေးလို ချိုအီမွှေး.. စားကြည့်ရင်တော့ ဒညင်းသီး အနံ့နဲ့ သံပုရာသီးလို ချဉ်ပြုံးကြီး ဂွိ.. ကနဲ ဂျွိ.. ကနဲ ဇွိ.. ကနဲ ဟုတ်တယ်.. အဲ့ဒါ.. အဲ့ဒါ..။
(၃) တယောသံလို အိညောင် အိညောင်လေးလား..! နှဲသံလို ချွဲချွဲပြစ်ပြစ် ကပ်စေးစေး ကြီးလား..! စောင်းသံလို စောင်း.. အဲ့ စောင်းသံလိုလား..! ဂစ်တာကြီးလို အားရပါးရဖက်ပြီး ပလက်ကင်လေးကုတ်.. နောက်ဆုံးတော့ မင်္ဂလာဆိုင်းဝိုင်း ကြီးထဲက ပတ်မကြီးလို “ပုံပုံ ပတ်ပတ် ပုံပတ်ပေပေ..” “ပလို့ဂျိ” ဂျိ ကနဲ ဂျိ ကနဲ.. ဟုတ်တယ် နားရင်းနှစ်ဖက်ကို တဗြောင်းဗြောင်းနဲ့ နာနာရိုက်.. “ပလို့ဂျိ..” အဲ့ဒါ.. အဲ့ဒါ..။
(၄) စိန်ချူးကြာညှောင် လရောင်က လင်းပါလို့ အို့ ဟို့ ဟို့... အဲ့လို သီချင်း အကြီးကြီးလား..! လှုပ်လှုပ်.. လှုပ် လက်နှစ်ချောင်းကို အပေါ်မှာပူး.. မြူးပြီဆို လှုပ်.. အဲ့လို ဒစ္စကို လှုပ်ခတ်ခတ်ကြီးလား..! ပေါ့ပ်တပုဒ်လို ပုပ်ချင်ပုပ် ပွချင်ပွ ပုပ်ပွ အဲ့ ပေါ့ပ်.. အဲ့လိုလား..! ပန့်ခ်တပုဒ်လို ထောင်ချင်တိုင်းထောင် (ဆံပင်) ပန်းရောင်ဆိုးပြီး ပန်းချင်တိုင်း ပန်း.. အဲ့.. ပန်းရောင်ဆိုးတဲ့ ပန့်ခ်.. ဘေ့စ်သံခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ မပြီမသအော်.. ကုန်းအော်.. ရောခ့်ခပ်ပြင်းပြင်းလို ခြစ်ပြီးအော်.. ညှစ်ပြီးအော်.. “ရေးးဟေးး ရေရေးး..”.. ဘီလူးစ်စီးပြီး အာရ်အမ်ဘီလေးလို ရစ်သမ်မှန်မှန်လေးနဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆရာရက်ပ်ပါ ပါပါးကြီးတွေလို.. ဂွကျကျကို မ.. မ.. အားရပါးရ မ.. ရေ့ ရေ့..!! ယိုး ယိုး...!! အာဟ.. အာဟား..!! အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ..။
နားလည် သလိုလိုနဲ့ နားမလည် မဟားတရား ဝါးတားတာ ဟော.. တစ်ကွေ့ နောက်ထပ်... တစ်ကွေ့ ပြီးတော့..!!
အေးးဟေး.. ပြီးတော့.. ရှော့တွေဖြစ်.. လိုင်းတွေပူး.. ဓါတ်တွေလိုက်.. သပွတ်အူတွေရှုပ် ရှုပ်ပြီးရင်း ရှုပ် အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ..။
ညီငယ်လေး..! အဲ့... မောင်ငယ်လေး..!
(နှစ်ယောက်ပေါင်းခေါ်တော့) ညီမောင်ငယ်လေး သာပေါ်တောင်း (တောင်ပေါ်သား) ရေ..
ညီမောင် Tag (တက်) ထားတဲ့ “အချစ်တခုကို ဝင်ရောက်ခံစားကြည့်ခြင်း” ဆိုတာလေးကို
မြင်တဲ့ အတိုင်း ကိုးရိုးကားရား ရေးလိုက်ပါတယ်နော်..း)း)
Dream>> တီတီဒွင်းပြောတဲ့ အချစ်ဆိုတာ